‘छक्का पञ्जा ३’ मा नायिका दीपिका प्रसाई फाइनल, दीपकराजको जोडी प्रियंका कि दीपिका ? – Medianp
‘छक्का पञ्जा ३’ मा नायिका दीपिका प्रसाई फाइनल, दीपकराजको जोडी प्रियंका कि दीपिका ?
हेर्नुस् दीपिकाका केही तस्बिर पनि
Media NPप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, बैशाख ११, २०७५१२:५९0
काठमाडौं, ११ वैशाख । ‘ऐश्वर्य’ चलचित्रबाट रजतपटमा प्रवेश गरेकी नायिका दीपिका प्रसाई ‘छक्का पञ्जा ३’ मा अनुबन्ध भएकी छन् । यही वैशाख १७ गतेदेखि सुटिङ सुरु हुने चलचित्र ‘छक्का पञ्जा’ सिरिजको सिक्वेल चलचित्र हो ।
‘छक्का पञ्जा ३’ को निर्देशन दीपाश्री निरौलाले गर्ने भएकी छन् । चलचित्रमा दीपिका दीपकराज गिरीको जोडी हुनेछिन् । यसअघिका ‘छक्का पञ्जा’ र ‘छक्का पञ्जा २’ दुवै चलचित्रमा प्रियंका कार्की दीपकराज गिरीको जोडी भएर अभिनय गरेकी थिइन् । उनी ‘छक्का पञ्जा ३’ मा पनि रहनेछिन् ।
चलचित्रमा अभिनय गर्ने सबै कलाकारको फाइनल भइनसके पनि नायिकामा दीपिकाको टुंगो लागेको हो । दीपिकाले भुवन केसीले निर्माण गर्न लागेको ‘क्याप्टेन’ चलचित्रमा पनि खेल्न सक्ने बताइएको छ । सो चलचित्रको निर्देशन दिवाकर भट्टराईले गर्ने भएका छन् ।
‘छक्का पञ्जा ३’ आगामी दसैंमा रिलिज हुनेछ । निर्माण पक्षले ‘छक्का पञ्जा ३’ मा अधिकांश पुरानै टिमका कलाकार दोहोरिने जानकारी दिएको छ । करिब दुई करोडको लागतमा बन्ने ‘छक्का पञ्जा ३’ को अधिकांश सुटिङ पोखरा आसपासमा हुने निर्देशक निरौलाले जानकारी दिइन् । चलचित्रको संगीतकारमा अर्जुन पोखरेल र दीपक शर्मा तथा छायाँकारमा पुरुषोत्तम प्रधान छनोट भएका छन् । चलचित्रमा केदार घिमिरे, जितु नेपाल, शिवहरि पौड्याल, बुद्धि तामाङलगायतका कलाकार पनि हुनेछन् ।
तस्बिरः दीपिकाको फेसबुकबाट
रुस–चीनसँग डरायो अमेरिका, हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र बनाउदै
महानायक राजेश हमालको जोक्स सामाजिक सञ्जालमा भाइरल